Soomaalida isticmaasho baraha bulshada oo la ogaaday khatar weyn kusoo wajahantahay oo laga dhaxlo internedka - Banaadisom
Home Arimaha Bulshada Soomaalida isticmaasho baraha bulshada oo la ogaaday khatar weyn kusoo wajahantahay oo...
Isticmaalka badan ee baraha bulshada wuxuu dhaawac u geysanayaa maskaxda dhalinyarada, sida lagu ogaaday daraasad cusub oo lasoo saaray.
Cilmi baadhis ay sameysay hayadda waxbarashada iyo fayo-dhowrka ayaa diiradda lagu saaray barbaarta dhigata iskuullada hoose dhexe.
Wiilashada iyo gabdhahaba waxyeello caafimaad way kasoo gaartaa marka ay da’dooda tahay 14 sano, laakiin gabdhaha ayaa markaas kaddib ay shaqada maskaxdooda hoos u sii dhacdaa, sida ay daraasaddu ogaatay.
Draasaddan ayaa sidoo kale sharraxday in:
DEG DEG: Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed Oo Markii Ugu Horeysay Soo Hadlay(Opens in a new browser tab)
Waxay cilmi baaristan ku talisay in la joogteeyo jimicsiga.
“Dhalinyaradu waa in ay helaan adeegyo ka caawiya caafimaadka maskaxda iyo jimicsi joogto ay,” ayaa lagu yidhi daraasadda.